वल्र्डकपमा एसियाली देशको समर्थन गर्छु - कुराकानी - साप्ताहिक
वल्र्डकपमा एसियाली देशको समर्थन गर्छु
कोमल वली, पूर्व फुटबलर/सांसद
कहिलेदेखि फुटबलमा रुचि जाग्यो ?
म सानैदेखि भकुन्डो खेल्थेँ । गाउँमा साथीहरूसँग कपडाको बल बनाएर खेलिन्थ्यो । स्कुल जान थालेपछि अलि राम्रोसँग फुटबल खेल्न पाएँ । त्यसपछि ममा फुटबलको रस बस्यो ।
तपाईंले फुटबल खेल्दा नेपाली फुटबलको अवस्था कस्तो थियो ?
त्यो बेला नेपाली फुटबलको अवस्था निकै राम्रो थियो । पूर्वाधार त्यति थिएन, तैपनि खेलाडीहरू अनुशासित थिए । खेलाडीहरूमा उत्साह थियो । सबै जना जित्नैपर्छ भन्दै मरिमेटेर खेल्थे ।
महिला राष्ट्रिय टिममा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म स्कुलमा पनि फुटबलको क्याप्टेन थिएँ । अन्तरविद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा समेत सहभागी हुन्थेँ । अञ्चलस्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा दाङबाट खेल्थेँ । यही क्रममा मैले नै नेतृत्व गर्ने गरी राप्ती अञ्चलबाट राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाएँ ।
फुटबल खेल्न किन छाड्नुभयो ?
स्कुल पढ्दा फुटबल धेरै खेलेँ, तर पछि मैले एथलेटिक्स रोजेँ । त्यसपछि मैले फुटबलको यात्रामा विराम लगाएँ । तैपनि फुटबलको मोह अझै गएको छैन ।
यसपालिको विश्वकप फुटबल कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
घरपरिवार तथा नजिकका साथीभाइहरूसँग बसेर हेर्ने सोच बनाएकी छु ।
कुन देशलाई समर्थन गर्दैहुनुहुन्छ ?
अरूको भन्दा मेरो अलि फरक छ । म खेल र देशको हिसाबमा समर्थन गरिरहेकी हुन्छु । हामीलाई सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरूप्रति सहानुभूति राख्छु, तर तिनले जित्दैनन् । म यसभन्दा अघिल्लो विश्वकपमा जर्मनीको पक्षमा थिएँ । जर्मनी हाम्रो नजिकको मित्रराष्ट्र हो । यसपालि पनि म जापानलगायतका एसियाली देशहरूको पक्षमा छु, तर अर्जेन्टिना र ब्राजिल विशेष मन पर्छन् ।
प्रकाशित :असार ३, २०७५
इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बलियो
एसियाली देशको चुनौती
एसियाडमा रजत पदक जितेको वर्ष